Wednesday January 31, 2018 - 08:29:59 in Wararka
Xiisada ayaa salka ku heysa xariga magaalada Kismaayo shalay loogu geestay Xildhibaan katirsanaa Baarlamaanka maamulka Jubbaland oo la sheegay in Xasaanada laga qaaday kadib markii uu Mucaaraday Axmed Madoobe.
Maleeshiyaad hubeesan iyo ciidamo ku heyb ah Xildhibaanka la xiray ayaa lagu arkayaa xaafado katirsan magaalada Kismaayo, waxaana xaafadaha qaar laga maqlayaa rasaas goos goos ah.
Ciidamada amaanka maamulka Jubbaland ayaa lasoo dhoobay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo, waxa ayna ciidamada baarayaan gaadiidka kala dsuwan ee dhax maraya magaalada .
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu wadaa in maanta magaalada Kismaayo kula kulmo qaar kamid ah Xildhibaanada maamulkaasi gaar ahaan kuwa ka laabtay mooshin Wasiiradiisa ka dhan ahaa.
Xildhibaanadan ka laabtay mooshin ay horey u saxiixeen ayaa la sheegay in loogu hanjabay xarig iyo in la dhibaateyn doono, waxa ayna arintaasi soo dedejisay in Xildhibaano badan cabsi owgeyd uga laabtaan mooshinka.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa u muuqda Hogaamiye kaligiis talis ah oon laga daba hadli karin, waxaana dadka siyaasadiisa kasoo horjeeda u geestaa hanjaabd xarig iyo in Kismaayo kasoo musaafuriyo.